Ciidamo gadoodsan oo saaka qabsaday xarumaha ay ka socotay Doorashooyinka Aqalka Hoose ee Maamulka Jubaland!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Ciidamo gadoodsan oo saaka qabsaday xarumaha ay ka socotay Doorashooyinka Aqalka Hoose ee Maamulka Jubaland!!
Ciidamo gadoodsan oo saaka qabsaday xarumaha ay ka socotay Doorashooyinka Aqalka Hoose ee Maamulka Jubaland!!
Ciidamo gadoodsan oo ka tirsan kuwa maamulka Jubballand ayaa saaka muddo kooban qabsaday xaruntii doorashada xubnaha aqalka hoose Jubbaland ee kumeel gaarka magaalada Kismaayo.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada hubeysan ay isku gedaameen xaruntaas iyagoo is hortaag ku sameeyey ergooyinka dooranaya xubnaha aqalka hoose oo saaka xaruntaas geli lahaa.
Ciidamadan ayaa ka cabanaya mushahar la’aan dhowr bilood heysata iyo daryeel xumo, waxayna dalbanayeen in la siiyo xuquuqdooda.
Masuuliyiin iyo saraakiil ka tirsan maamulka Juballand ayaa dedaal dheer iyo wadahadal ka dib ku qanciyey ciidamadii gadoodsanaa iney ka baxaan xarunta doorashooyinka aqalka hoose ee Kismaayo, iyadoo loo sameeyey balan-qaadyo.
Xaalada xarunta doorashada aqalka hoose ee Kismaayo ayaa hadda caadi ku soo laabatay, waxaana loo fasaxay ergooyinka wax dooranaya iney gudaha u galaan, iyadoo goor dhow la filayo iney halkaas ka bilaabato doorashada xubnaha aqalka hoose oo maalintii afaraad halkaas ka socota.
Previous PostDaawo MUUQAAL: Dowlada Kiinya oo Loogu baaqay Inay Ciidankeeda kala baxdo Soomaaliya kadib marka ay isku dhaceen Iyaga iyo Beesha Caalamka!! Next PostDAAWO MUUQAAL: Cabdiwali Gaas oo ka Hadlay Xal u helida dagaalka kosocda gobolka Mudug iyo Abaaro ee haysato Dadka Gobolada!!